Reykjavik, Oslo na Trondheim bụ ọnụ ala mgbazinye ụgbọ ala kachasị ọnụ na Europe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Reykjavik, Oslo na Trondheim bụ ọnụ ala mgbazinye ụgbọ ala kachasị ọnụ na Europe
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Iceland • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na Norway • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Obodo Norway ndị dị na Oslo na Trondheim so na ebe kachasị ọnụ ahịa na Europe ịgbazite ụgbọ ala, dị ka nyocha ọhụrụ emere site na ụlọ ọrụ mgbazinye ụgbọ ala.
Nnyocha ahụ tụnyere ọnụahịa mgbazinye ụgbọ ala maka ebe 50 gafee Europe n'oge August 2017. Maka ebumnuche nke nyocha ahụ, ọdụ ụgbọ elu nke ọ bụla na-aga dị ka ebe a na-atụpụ ma na-ada.
Na Trondheim, ndị ọbịa nwere ike ịtụ anya na ha ga-etinye nkezi nke € 342 kwa izu (ụbọchị mgbazinye 6) maka ụgbọ ala dị ọnụ ala. Ka ọ dị ugbu a na Oslo, isi obodo mba, ọnụahịa mgbazinye bụ naanị ntakịrị ọnụ karịa € 328 kwa izu. N'ezie, dị ka nnyocha ahụ si dị, naanị otu ebe na Europe dị ọnụ karịa obodo abụọ dị na Norway - isi obodo Iceland Reykjavik, ebe ọnụego nkezi bụ 345 XNUMX kwa izu.
Isi obodo Finnish nke Helsinki dị ka ebe 5th kachasị ọnụ maka mgbazinye ụgbọ ala, na nkezi ọnụego € 287 kwa izu. A na-anọchite Gris nke ọma, ya na Atens, Thessaloniki, Crete na Heraklion niile na-egosi ebe Top 10 kachasị ọnụ ahịa nyocha.
Tebụl na-esonụ na-egosi ebe 10 kachasị dị ọnụ na Europe maka ịgbazite ụgbọ ala n'oge okpomọkụ a. Ọnụahịa egosiri na-egosi nkezi kwa izu maka ụgbọ ala mgbazinye dị ọnụ ala na mpaghara ọ bụla n'oge oge 1-31 August 2017.
2. Trondheim (Norway) Euro € 342
3. Oslo (Norway) Euro € 328
4. Athens (Gris) Euro € 293
6. Thessaloniki (Greece) Euro € 278
7. Krit (Gris) Euro € 275
8. Heraklion (Greece) Euro € 244
9. Cagliari ()tali) Euro € 203
10. Palmero (Italy) Euro € 198